Al-shabaab oo Dilay Hooyo 8 Carruur ah dhashay | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Al-shabaab oo Dilay Hooyo 8 Carruur ah dhashay
Al-shabaab oo Dilay Hooyo 8 Carruur ah dhashay
Al-Shabab ayaa haweenay ku dilay magaalada Saakow ee Gobolka Jubbada Dhexe kadib markii ay ku eedeeyeen inay ku kacday fal sino ah. Al-Shabab ayaa ku eedeeyey in haweenaydan ay laba guur gashay.
Warar ay heshay Warbaahinta waxay sheegayaan in haweenaydaas ay ka tagtay nin hore u qabay kadib markii ay taageero ka weyday kadibna ay waalidkeed ka dalbatay in laga furo taasi oo ay sameeyeen.
Warar kale ayaa sheegaya in ninka hore uu ka adkaystay furitaanka balse waalidiinta oo adeegsanaya culimo ay ka fureen,Waxaan si madaxbannaan loo xaqiijin in haweenaydaasi ay laba nin isku mar guursatay. Waxaa kale oo aan la xaqiijin in haweenaydan ay qiratay arrintaasi maadaama maxkamadaha Al-Shabab aysan ahayn kuwa dadweynaha u furan.
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ayaa sheegay in eedaha Al-Shabab ee ah inay Maxkamad Sareen uu yahay waxba kama jiraan oo aysan waxba Xukumi karin.